Xubin katirsanaa Argagixisada Al-shabaab oo isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga Dalka – Radio Muqdisho
Xubin katirsanaa Argagixisada Al-shabaab oo isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga Dalka
Cali Nuur Ibraahim oo Magaciisa Afgarashada uu yahay Hamza oo ka mid ahaa kooxda Nabadiidka Al-shabab ayaa isku soo dhiibay guutada 8aad ee qeybta 60aad Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Cali ayaa Argagixisda Al-Shabab ku soo jiray in kabadan 7-sano,isa oo ka qeyb qaatey dagaalo dhowr ah oo ka dhacay Gobalada Hiiraan,Shabeellada dhaxe, Shabeellada hoose, Baay iyo Bokool iyo Gobalka Banaadir.
Cali Nuur Ibraahim ayaa sheegay sababaha uu ugu soo tagay Argagixisada AL-Shabaab “Waxaan ku dhibsaday dhiiga Islaamka oo ay Banaysanayaan, iyo dhibaatadda ay u geestaan Shacabka Soomaaliyeed”. Ayuu yiri Cali Nuur Ibraahim.
Guddoomiye Ku-xigeenka Gobalka Banaadir oo kulan la qadatay Guddiga Abaaraha GB “SAWIRRO”
Shey-baarka Xoolaha oo laga dhagax dhigay Galmudug “SAWIRRO”